Ogaden News Agency (ONA) – Baaq Deg Deg Ah: Abaaraha Ogadenya Ku Habsaday oo Gumaysigu & Beesha Caalamka Ka Jeedsadeen.
Baaq Deg Deg Ah: Abaaraha Ogadenya Ku Habsaday oo Gumaysigu & Beesha Caalamka Ka Jeedsadeen.
Posted by Daljir	/ January 27, 2017
Gargaar deg deg ah: Codsi oo ka yimid Jabhada ONLF
Abaaraha ku habsaday dhulka Soomaalida Ogadenia ayaa waxaa si ula kac ah indhaha uga dabooshay maamulka Gmaysiga Itobiya iyo Hayadaha Qaramada midoobay.
Roobabkii labaddii xili ee ugu dambeeyey oo aan dhulka Soomaalida Ogadenia ka di’in ayaa waxay sababeen kumanaan dhimasho ah oo dad iyo duunyo isugu jira. Gobolada intooda badan ayaa waxaa ka jira biyo la’aan baahsan, daaq la’aan dhinaca xoolaha ah iyo cunta yari saamaysay guud ahaan Ogadenya oo idil.
Xaalada abaarta waxaa sii murgisay cuno qabataynta xukuumada Gumaysiga Itoobiya ku soo rogtay dhulkaas taas oo xayirtay dhaq dhaqaaqa dadka iyo adeegyada kala wadan. Qoysas badan oo dibada masruuf looga soo diro ayaan lacagta ay helaan wax qiimo ah u lahayn sababtoo ah ma jirto wax cunto ah oo ay lacagtooda ku gadan karaan xayiraada dhulka iyo dadkaba saaran darteed. Dhinaca kale waxaa dhibka sii kordhiyey ururada gargaarka sida ICRC iyo kuwa kale een dowliga ahayn oo dhulka laga caydhiyey iyo dalka oon lahayn saxaafad madax banaan oon loo ogolayn inay dalka tagaan oo ay kasoo waramaan soona sheegaan xaaladda qalafsan iyo baahida dadku kujiro iyo baaxada abaarta.
Dhinaca kale wuxuu taliska Gumaysiga Itoobiya si badheedh ah indhaha caalamka uga qariyay shuban calooleedkii (Chlolera) ka dilaacay dhulka Soomaalida Ogadenia. Laba bari ka hor waxaa daacuunka u dhintay darsin dad ah oo uu ku jiro doctorkii kalida ahaa ee Soomaaliyed ee magaalada Qabridahare. Sidaa si lamid ah waxaa dhimasho badan laga soo warinayaa gobolada Nogob iyo Shabelle halka xoolaha iyo dadkuba ay biyo la’aan ugu dhamaadeen gobolada Doollo iyo Afdheer.
Wallow taliska Ethiopia iyo Hay’adaha UN tuba ay sheegeen ama carabka ku dhufteen abaaraha, nasiib daro dawlada Itoobiya waxay ku tilmaantay mid sahlan oon dhib sidaas u badan lahayn halka hay’adaha UN ta ay ku raaceen. Taliska Addis Ababa wuxuu had iyo goor isku dayaa inuu sawir been ah dunida tuso halkii ay u gargaari lahayd dadka abaartu tabaalaysay.
Raisal wasaaraha Itoobiya ayaa booqasho kadis ah oo aan caadi ahayn ku tagay gobolka Ogaden halkaas oo uu kaga qayb galay dabaaldag lagu xusayo maalinta Daaqa taas oo lagu qabtay magaalada Jigjiga, iyada oo dhinaca kale ay dadka xoolo dhaqatada ahi ay baahi ugu dhimanayaan tuulooyinka agagaarkiisa ah.
Jabhada ONLF waxay codsi deg deg ah u diraysaa Dawladaha, ururada iyo Shucuubta caalamka inay gargaar deg deg ah la soo gaadhaan shacabka ku nool Ogaden ee abaartu ku habsatay, kuna qasbaan taliska Itoobiya inay xayiraada ka qaado dhulkaas una ogolaato Hay’adaha gargaarka bixiya.
ONLF waxay gaadhsiinaysaa caalamka hadaan gargaar deg deg ah lala soo gaadhin dadka ku nool Ogadenya in dhibaatada ka dhalata abaartani ay ka xumaan doonto midii dhacday 2002 kii.
Ugu dambayn waxaan Ilaahayga Casa Wa-Jalaha ah uga baryaynaa inuu gargaaro daweynaha iyo deegaanka Soomaaliyeed.
اللهم اسقِ عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك، وأحيِ بلدك الميت”، “اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا”، “اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا”.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (JWXO/ONLF).